Blog Juan Herranz › Akwụkwọ na ihe nkiri maka onye ọ bụla
Akwụkwọ ndị ị na-agaghị echefu...
Ọ dị mma, aha ahụ bụ nwude. N'ihi na ihe ị ga-ahụ ebe a bụ ụfọdụ akwụkwọ nke onye na-edobe blọgụ a. Ma onye maara, eleghị anya, ị ga-achọ ịgụ ụfọdụ mgbe ị na-... Ị nwere ha na akwụkwọ nakwa dị ka ebook. Ụfọdụ n'ime ha gara site na ndetu iji jiri mana…
La Costa de las Piedras, akwụkwọ akụkọ ihe mere eme na Mallorca
Akwụkwọ akụkọ ihe omimi nke na-abịakwute anyị n'okpuru pseudonym nke Alejandro Bosch, ikekwe iji mechie isi ihe omimi ahụ nke na-ejupụta atụmatụ ahụ. N'ihi na akụkọ ahụ na-apụ na akụkụ magnetik ya nke njem ọ bụla dabere na mgbagwoju anya akụkọ ihe mere eme. Ewepụtara ya maka emume ahụ n'ụdị ọmarịcha ya na…
Akwụkwọ kacha mma nke Fernando Repiso
Ọ na-amasị m ndị ode akwụkwọ ọhụrụ na-abata dị ka elephant na ụlọ ahịa china. Kpọmkwem n'ihi na akwụkwọ chọrọ ikike ahụ maka iju anya, ntụgharị ahụ na mweghachi nke echiche efu site na ụdị akụkọ. Ma ọ bụghị ya, ihe na-amalite ịdị ka akụkọ dị larịị. Ọbụna karịa n'ụdị ewu ewu a na-akpọ…
Okwu anyị na-enyefe na ifufe, nke Laura Imai Messina
A na-ewepụ ọnwụ mgbe ọ na-abụghị ụzọ ọpụpụ kwesịrị ekwesị site na ọnọdụ ahụ. N'ihi na ịhapụ ụwa a na-ehichapụ ihe niile dị na ebe nchekwa. Ihe na-adịghị adị n’ezie bụ ọnwụ nke onye ahụ a hụrụ n’anya bụ́ onye nọ mgbe nile, ọbụnadị obere n’ọdachi zuru ezu. Ihe mfu na-atụghị anya ya...
Akwụkwọ kacha mma 3 nke Domingo Villar dere
Ụdị noir na-anabatakarị onye odee dị ka Domingo Villar na ogwe aka mepere emepe. N'ihi na Galician a hụrụ akwụkwọ ozi n'anya bụ otu n'ime ndị edemede ahụ mere ọrụ ya n'ozuzu ya, ihe ngosi na ihe egwu agwa, ka a na-amata mgbe niile dị ka onye okike ...
Akwụkwọ Emma Cline 3 kacha elu
Mgbe ụfọdụ esemokwu, nkata na-agụnye ilegharị anya n'ọnọdụ nke eziokwu site na prism na-adịghị ahụkebe, na-enye nsogbu, na-adịghị mma. Enweghị ezi uche na-enweghị nke ahụ gafere nkezi, nke nkịtị. N'ihi na ọtụtụ oge akụkọ ifo na-agba anyị gburugburu, ọbụna karịa taa, n'ụdị netwọk mmekọrịta,…
Peeji1 Peeji2 ... Peeji294 Ọzọ →